Ruzivo rwekugadziriswa kwe data rako pachako nenzvimbo Thatsluck.com
Saiti ino haina kuunganidza zvemunhu data, rinogamuchira chete makuki evaya vasina kuseta bhurawuza kuti rivaremedze uye ne IP kero dzePC dzinoshandiswa kurodha pasi software.
Izvi ndizvo chaizvo zvese, zvichiteerana neGDPR iri kushanda kubvira 25/05/2018, ruzivo urwu rwakanyorwa nenzira yakapusa.
Chero ani anoda kundibatsira kuvandudza anogamuchirwa uye anogona kunyorera Luigi TaIamo, anoona nezve kugadziriswa kwedata uye kuchengetedzwa, painotevera email kero: adm @thatsluck.com
Kune avo vanofarira, sezvazvinofanira kuita, heino humwe hwakadzama ruzivo.
Ruzivo urwu rwakagadzirirwa kuti mushanyi azive nezvesaiti ThatsLuck.com nzira dzekugadzirisa dunhu rako maererano naye, zvinoenderana neMutemo Wemutemo 196/2003 ("Yakavanzika Kodhi") uye iyo Mutemo (EU) 2016/679 ("GDPR").
Nzvimbo ThatsLuck.com inounganidza manhamba ekuverenga data kuti uzive kuti vangani vashanyi vanopfuura pamapeji ayo uye neIP kero dzevaya vanorodha pasi software, idzi data harizivikanwe kune chero munhu uye dzinongoshandiswa kugadzirisa zviri mukati mewebhusaiti.
Kugadziriswa kwe data rako pachako kunoitwa kuchishandiswa zvemagetsi maitiro uye midhiya yenguva yakanyatso kudikanwa kuti zvibudirire zvinangwa zvakaunganidzirwa data uye, chero zvazviri, mukuteedzera misimboti yepamutemo, kururamisa, kusapfuudza uye kukosha kwakapihwa yemitemo yazvino. zvakavanzika.
ThatsLuck.com Unogona kushandisa izvo zvinonzi zvemagariro plug-ins. Zvemagariro plug-ins zvishandiso zvakakosha zvinokutendera iwe kuti ubatanidze mashandiro emasocial network zvakananga muwebhusaiti (semuenzaniso "senge" basa reFacebook).
Ese ma plug-ins pane ino saiti anoiswa mucherechedzo iwo logo ane epuratifomu chikuva (semuenzaniso Facebook, Google, Twitter, YouTube, Amazon).
Paunoshanyira peji resaiti uye nekudyidzana ne plug-in, iyo inoenderana ruzivo rwunotapurwa kubva kubhurawuza yakananga kune yekuvavarira chikuva uye inochengetwa nayo
Kuti uwane ruzivo nezve zvinangwa, mhando uye nzira dzekuunganidza, kugadzirisa, kushandisa uye kuchengetedza dhata yega neepuratifomu yekunze, pamwe nezvenzira dzekushandisa kodzero dzako, ndokumbira ubvunze mutemo wepachivande unogamuchirwa nechero saiti.
ThatsLuck.com ine zvinongedzo kunzvimbo dzekunze: zviri pachena kuti haina mutoro wekubata zvakavanzika zvesaiti idzi.
Iwo zvidzidzo zvinotaurwa nezve data zvataurwa pamusoro apa, vane kodzero yekushandisa kodzero dzavo nenzira uye mukati memiganhu yakagadzwa nemutemo wepachivande wazvino uye vane kodzero yekukumbira:
kuwana (ivo vanogona kukumbira kusimbiswa kwekuti kana dhata ine chekuita navo iri kugadziriswa, pamwe nekumwe kujekeserwa nezve ruzivo rwunotaurwa muChiziviso ichi, pamwe nekugamuchira iyo data pachayo, mukati memiganhu yekunzwisisa);
kugadziriswa (vangangobvunza kugadzirisa kana kuwedzera iyo data iyo yavakatipa kana chero zvipi zvacho zvatinazvo, kana zvisiri izvo);
kukanzurwa (vanogona kukumbira kuti iyo data yakawanikwa kana kugadziriswa nesaiti ibviswe);
vanopikisa (vanogona kupokana nekugadziriswa kwedata ravo chero nguva);
kutakurika (ivo vanogona kukumbira kuti vagamuchire yavo data, kana kuti igoendeswa kune mumwe muridzi inoratidzwa navo, mune yakarongeka fomati, inowanzo shandiswa uye inoverengwa ne otomatiki chishandiso). Uyezve, zvichienderana nehunyanzvi. 7, ndima 3, GDPR, kodzero yekubvisa mvumo inogona kushandiswa chero nguva, pasina kusarudzira kutenderwa kwekurapa kunoenderana nemvumo yakapihwa kare.
Chekupedzisira, vashanyi vane mvumo yekuisa chichemo kuSupervisory Authority, iri muItari iyo Guarantor yeKuchengetedzwa Kwemunhu Dhata.
Kana vashanyi vakaona kuti chimwe chinhu hachina kumira zvakanaka, zvakadaro, vanogona kuyambira mutongi uye anotora matanho akakodzera nekukurumidza sezvazvinogona.
Iko kunokwanisika kupinda mukushanda kwemitemo mitsva yemubato, pamwe nekuramba uchiongorora uye nekuvandudza masevhisi kumushandisi, zvinogona kutungamira mukuda kwekushandura nzira nemitemo yakatsanangurwa muChiziviso ichi.
Saka zvinoita kuti gwaro iri riite shanduko nekufamba kwenguva.
Isu tichashambadza chero shanduko kuichi Cherechedzo pane ino peji uye, kana zvichikosha, isu tinokuzivisa iwe nechinooneka chinozivisa.
Shanduro dzekare dzeruzivo urwu, mune chero mamiriro ezvinhu, dzichachengetwa kubvumira kubvunza.